Fanazaran-tratra sy fitaovam-piadiana ho an'ny lehilahy mihoatra ny 40 taona - Fihenam-bidy ara-batana
Home » Blog » Fanazaran-tratra sy fitaovam-piadiana ho an'ny lehilahy mihoatra ny 40 taona
Amin'ity horonantsary androany ity dia hijerena fanazaran-tratra sy fitaovam-piadiana ho an'ny lehilahy 40 mahery
Fiofanana ho an'ny lehilahy mihoatra ny 40 - Fihetsiketsehana tratra sy fitaovam-piadiana ho an'ireo lehilahy mihoatra ny 40 taona
Te ho 40 STRONG ve Ianao?
Topazo maso ity ohatra fanazaran-tena ity amin'ny Andro 2 amin'ny Herinandro 2 namoaka programa 40 STRONG vaovao.
Ao amin'ny tena fampiharana dia afaka tsindrio ny fanazaran-tena hahitana horonantsary mampiseho anao ny fomba fanaovana azy.
Tianay ity programa fampihetseham-batana miisa 40 miampy ity satria fampihetseham-batana tena ilaina ho an'ny tovolahy mihoatra ny 40 taona.
Ataovy azo antoka fa andramo ity atrikasa ity amin'ity takariva ity ary ampahafantaro anay ny hevitrareo!
March 11, 2020 Admin Blog, fanazaran-tena Tsy asian-teny